Vaovao - Ahoana no fiasan'ny vera ambany-e
Ny fitaratra dia iray amin'ireo fitaovana fananganana malaza sy be mpampiasa indrindra ampiasaina ankehitriny, noho ny ampahany amin'ny fanatsarana tsy tapaka ny fanatanterahana ny masoandro sy ny hafanana. Fomba iray hanatanterahana an'io fampisehoana io amin'ny alàlan'ny fampiasana pataloha ambany sy ambany fanaraha-maso ny masoandro. Ka inona no atao hoe vera ambany e? Amin'ity fizarana ity dia manome anao topy topy fijerin'ny coatings ianao.
Mba hahatakarana ny fametahana dia ilaina ny mahatakatra ny fiparitahan'ny angovo avy amin'ny masoandro na angovo avy amin'ny masoandro. Ny hazavana Ultraviolet (UV), ny jiro hita maso ary ny jiro infrared (IR) dia samy mitana faritra samihafa amin'ny fiparitahan'ny masoandro - ny fahasamihafana misy eo amin'izy telo dia voafaritry ny halavan'ny halavany.
• Jiro ultraviolet, izay no mahatonga ny fitaovana anatiny toy ny lamba sy ny firakofana rindrina manjavona, dia manana halavan'ny 310-380 nanometatra rehefa mitatitra ny fahombiazan'ny fitaratra.
• Ny hazavana hita maso dia mitana ny ampahany amin'ny spectrum eo amin'ny halavan'ny halavan'ny 380-780 nanometatra.
• Ny hazavana tsy maharitra (na angovo hafanana) dia ampitaina ho hafanana ao anaty trano iray, ary manomboka amin'ny halavan'ny 780 nanometro. Ny infrared amin'ny masoandro dia matetika antsoina hoe angovo infrared-onja fohy, raha ny hafanana miposaka amin'ny zavatra mafana kosa dia manana halavan'ny lava kokoa noho ny masoandro ary antsoina hoe infrared onja-lava.
Ny coatings Low-E dia novolavolaina mba hampihenana ny habetsaky ny jiro ultraviolet sy infrared izay afaka mandalo fitaratra nefa tsy manimba ny haben'ny hazavana hita izay ampitaina.
Rehefa entin'ny vera ny hafanana na ny hazavana dia esorina amin'ny alàlan'ny rivotra mihetsika na tarehin'ny velaran'ny fitaratra. Ny fahafahan'ny fitaovana manaparitaka angovo dia fantatra amin'ny hoe emissivity. Amin'ny ankapobeny, ireo fitaovana be taratra dia manana emissivite ambany ary ireo maizina miloko maizina kokoa dia manana emissivity avo. Ny fitaovana rehetra, ao anatin'izany ny varavarankely, dia mamiratra hafanana miendrika onja lava-lava, infrared énergie miankina amin'ny emissivité sy ny maripanan'ny haavony. Ny angovo mamiratra dia iray amin'ireo fomba lehibe isehoan'ny famindrana hafanana amin'ny varavarankely. Ny fampihenana ny emissivity ny iray na maromaro amin'ny fitaratra amin'ny varavarankely dia manatsara ny toetran'ny fikorontanan'ny varavarankely. Ohatra, ny vera tsy misy sarony dia manana emissivity .84, raha Vitro Architectural Glass '(vera PPG teo aloha) mifehy ny masoandro Solarban® 70XL fitaratra manana emissivity ny .02.
Eo no ilalaovana ny firakotra ambany (na vera ambany e). Ny vera Low-E dia misy fonosana manify sy mangarahara — manify kokoa noho ny volon'olombelona - izay taratry ny angovo maharitra infrared (na hafanana). Ny ambany-e dia misy taratry ny angovo infrareda amin'ny masoandro misosa kely ihany koa. Rehefa manandrana mandositra any amin'ny mangatsiaka kokoa any ivelany mandritra ny ririnina ny angovo hafanana ao anatiny dia hita taratra ny hafanana miverina ao anatiny, mampihena ny fahaverezan'ny hafanana mamirapiratra amin'ny alàlan'ny vera. Mitranga ny mifamadika amin'ny fahavaratra. Raha hampiasa fampitahana tsotra, ny vera ambany dia miasa mitovy amin'ny thermos. Ny thermos dia manana firakofana volafotsy, izay maneho ny hafanan'ny fisotroana ao anatiny. Ny hafanana dia voatazona noho ny fisaintsainana tsy tapaka izay miseho, ary koa ny tombony azo avy amin'ny rivotra izay omen'ny habakabaka eo anelanelan'ny akorandriaka anatiny sy ivelany an'ny thermos, mitovy amin'ny fitaratra fitaratra mitazona. Koa satria ny vera ambany e dia misy sosona volafotsy manify na fitaovana ambany hafa, dia mihatra amin'izany koa ny teoria. Ny firakotra ambany volafotsy dia maneho ny mari-pana anatiny aoriany, mitazona ny efitrano hafana na hatsiaka.
Karazan-dity ambany sy fomba fanodinana ambany
Misy karazany roa tokoa ny palitao ambany-e: ny firakotra ambany-e ary ny palitao ambany-e mifehy ny masoandro. Ny fonosana ambany-e passive dia natao hanamafisana ny fahazoan'ny hafanan'ny masoandro ao an-trano na tranobe mba hamoronana ny vokatry ny fanafanana "passive" ary hampihena ny fiankinan-doha amin'ny fanafanana artifisialy. Ny fonosana ambany-e mifehy ny masoandro dia natao hamerana ny habetsahan'ny hafanan'ny masoandro mandalo ao an-trano na tranobe mba hitazomana ny trano hangatsiaka kokoa sy hampihena ny fanjifana angovo mifandraika amin'ny famatsiana rivotra.
Ireo karazana fitaratra ambany-e, passive ary solar control, dia vokarin'ny fomba famokarana roa voalohany - pyrolytic, na "palitao mafy", ary Magnetron Sputter Vacuum Deposition (MSVD), na "palitao malefaka". Amin'ny fizotran'ny pyrolytic, izay nanjary fahita tamin'ny fiandohan'ny taona 1970, dia nopetahany kofehy fitaratra ny lamba rehefa novokarina teo amin'ny tsipika mitsingevana. Avy eo dia "mifangaro" amin'ny vatan'ny vera mafana ny firakotra avy eo, ka mamorona fatorana matanjaka izay mateza be amin'ny fikirakirana fitaratra mandritra ny famoronana. Farany, ny vera dia nendahana ho takelaka mitahiry habe isan-karazany halefa any amin'ny mpanamboatra lamba. Ao amin'ny fizotran'ny MSVD, natomboka tamin'ny taona 1980 ary nodiovina tsy an-kiato tato anatin'ny folo taona lasa izay, ny pataloha dia apetaka ivelan'ny tsipika amin'ny vera voapaika mialoha ao anaty efitrano fantsom-panafana amin'ny hafanan'ny efitrano.
Noho ny fivoaran'ny tantaran'ireo haitao fandrakofana ireo dia matetika ny firakotra ambany-e dia ampifandraisina amin'ny fizotran'ny pyrolytic sy ny fanaraha-maso ny masoandro ambany-e amin'ny MSVD, na izany aza, tsy marina tanteraka intsony izany. Ho fanampin'izany, ny fahombiazana dia miovaova arakaraka ny vokatra sy ny vokatra ary ny mpanamboatra hatramin'ny mpanamboatra (jereo ny tabilao etsy ambany), fa ny latabatra angon-drakitra fampisehoana dia azo zahana ary fitaovana an-tserasera marobe no azo ampiasaina hampitahana ireo firakotra ambany e rehetra eny an-tsena.
Ao amin'ny tontonana IG indroa misy tontonana efatra mety azo apetraka amin'ny coatings: ny endrika voalohany (# 1) dia miatrika ivelany, ny faharoa (# 2) ary ny fahatelo (# 3) dia mifanatrika ao anatin'ny vatan'ny vera mitazona sy dia misaraka amin'ny spacer peripheral izay mamorona habakabaka miserana, raha ny atiny fahefatra (# 4) kosa miatrika mivantana ao anaty trano. Ny coatings low-e passive dia miasa tsara indrindra raha amin'ny faritra fahatelo na fahefatra (lavitra indrindra ny masoandro), raha toa kosa ny fonosana ambany-e mifehy ny masoandro dia miasa tsara indrindra rehefa eo amin'ny lite akaiky ny masoandro, matetika ny faritra faharoa.
Fepetra fampisehoana ambany-e
Ny palitao ambany e dia apetaka amin'ireo faritra samihafa misy fonosana fitaratra mitazona. Na ny fanakonana ambany-e dia heverina ho fanaraha-maso pasif na fanaraha-maso ny masoandro, dia manolotra fanatsarana ny sanda fampisehoana izy ireo. Ireto manaraka ireto dia ampiasaina handrefesana ny fahombiazan'ny vera amin'ny firakotra ambany e:
• U-Value dia ny naoty omena ny varavarankely mifototra amin'ny habetsaky ny fahaverezan'ny hafanana avelany.
• Transmittance maivana hita dia refin'ny habetsaky ny hazavana mandalo eo am-baravarankely.
• Coefficient ahazoana hafanana amin'ny masoandro dia ny ampahan'ny zava-nitranga taratra masoandro nampidirina am-baravarankely, samy nampita mivantana sy nokaoka ary nipoitra indray tao anatiny. Arakaraka ny maha-ambany ny hafanan'ny masoandro avy amin'ny varavarankely no ahazoana coefficient, dia mihena ny hafanan'ny masoandro ampitainy.
• Hazavana mankany amin'ny Solar Gain dia ny refy eo amin'ny varavarankely an'ny Solar Heat Gain Coefficient (SHGC) sy ny isa nomen'ny hazavana azo jerena (VLT).
Ity misy fomba fandrefesana ny firakotra amin'ny fampihenana ny habetsahan'ny hazavana ultra-violet sy infrared (angovo) afaka mandalo fitaratra nefa tsy manimba ny habetsaky ny hazavana hita izay ampitaina.
Rehefa mieritreritra ny famolavolana varavarankely: ny habe, ny loko ary ny toetra hafa mahafinaritra dia ao an-tsaina. Na izany aza, ny palitao ambany e dia mitana andraikitra lehibe ary misy fiatraikany lehibe amin'ny fahombiazan'ny varavarankely sy ny vidin'ny trano fanafanana, jiro ary fanamafisana ny trano.